LibreOffice 7.2.7 inosvika ichigadzirisa tsikidzi dzichangoburwa mune ino nhevedzano | Linux Addicts
LibreOffice 7.2.7 inosvika ichigadzirisa tsikidzi dzichangoburwa munhevedzano iyi. Kubva zvino zvichienda mberi ivo vanozotarisa zvakaenzana pa7.3
pablinux | 12/05/2022 18:28 | Free Software
Kana zviri zvekugadzirisa zvinoburitswa neThe Document Foundation yehofisi yayo suite, ivo vanowanzo buritsa kanosvika mashanu. Ndipo panowanzo kurudzirwa nhevedzano itsva kuzvikwata zvekugadzira. Yechitanhatu poindi yekuvandudza inowanzoburitswa gare gare, uye zvinopfuura izvo kungogadzirisa gross bugs kana kuvhara chikuru chekuchengetedza kukanganisa. Masikati ano ivo vaparura LibreOffice 7.2.7, uye chimwe chinhu chakakomba zvikuru chaizofanira kuitika kuitira kuti chikamu chechisere chigodiwa panguva.
handizvitauri vanozvitaura patwitter, asi kuti udzivise kuvhiringidzika, zvinofanirwa kutaurwa kuti ivo vanoti "zvichida" iyo yekupedzisira update ye7.2. Zvakare pane microblogging network iyo Elon Musk achangotenga ivo vataura izvozvo 47 tsikidzi dzakagadziriswa, uye rondedzero yekuchinja yakakamurwa pakati pechinyorwa che iye RC1 uye chinyorwa che iye RC2 yeLibreOffice 7.2.7.
LibreOffice 7.2.7 inogadzirisa 47 bugs
Kunze kwekutaura makumi mana nenomwe zvigadziriso zvebug uye kuti iyi ingangove yekupedzisira update mu47 nhevedzano, zvimwe zvishoma zvinogona kutorwa kubva munhau idzi. Zvakadaro, The Document Foundation haipotsa chiitiko uye zvakare inotiyeuchidza kuti izvo vazhinji vedu tiri kushandisa Rudzi rwemunharaunda, uye kuti kune Enterprise yemakambani.
Misiyano pakati pezvinyorwa zvese zviri zviviri mishoma, asi yakakosha: isu isu tinogara muCommunity edition tinofanira kugadzirisa rutsigiro rwunopihwa nenharaunda, chimwe chinhu chingave chakakwanira kune vakawanda. neshanduro Enterprise taizowana rutsigiro rwakananga kubva kukambani, uyezve vanovimbisa kuti tinogona kuodha à la carte maficha.
LibreOffice 7.2.7 ikozvino inogona kutorwa kubva ku webhusaiti yepamutemo yeprojekti. Iyi ndiyo vhezheni inokurudzirwa kuzvikwata zvekugadzira sezvo iri kunyanya kuyedzwa uye nekukwenenzverwa. Kune avo vanoda zvinhu zvitsva kugadzikana, zvakare inowanikwa Mahara Hofisi 7.3.3. Pamusoro pezvo, vakatozivisa kuti vari kushanda pachirongwa che7.4.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » LibreOffice 7.2.7 inosvika ichigadzirisa tsikidzi dzichangoburwa munhevedzano iyi. Kubva zvino zvichienda mberi ivo vanozotarisa zvakaenzana pa7.3
AlmaLinux 8.6 yakatoburitswa uye idzi ndidzo nhau dzayo
chromeOS 101 inosvika ine shanduko yezita uye nyowani yekurodha skrini, pakati pedzimwe nhau